Man United oo bilowday inay ka fikirto inay ceyriso macallinkeeda Solskjær & Tababaraha ugu cad-cad kuwa ay soo qaadanayso oo la sii ogaaday – Gool FM
(Manchester) 26 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa bilowday inay ka fikirto inay ceyriso macalin Ole Gunnar Solskjær, isla markaana ay ka fiirsato badelkiisa.
Saraakiisha kooxda Man United ayaa waxay ka fiirsanayaan inay ceyriyaan macalin Ole Gunnar Solskjær haddii waxqabadka iyo natiijooyinka ay si xun ku sii socdaan, iyadoo tababbaraha xulka qaranka England ee Gareth Southgate uu noqday musharaxa ugu cad-cad ee la wareegi kara shaqada tababarka ee Red Devils.
Wargeyska “Daily Mail” ayaa xaqiijiyay in kaddib natiijooyinka aan wanaagsaneyn ee Manchester United, sidoo kale guuldarradii ugu dambeeysay ay kala kulmeen Burnley kulankii ka dhacay garoonka Old Trafford ee horyaalka Premier League, iyo banaanbaxyada taageerayaasha, ay dhalisay in Solskjær uu lumiyo kalsoonidii uu maamulka ku qabay.
Maamulka sare ee kooxda Manchester United ayaa waxay aaminsan yihiin in Gareth Southgate uu yahay xulka ugu fiican si uu u leyliyo kooxda Red Devils.
Madaxa fulinta ee kooxda Man United ee Ed Woodward ayaa la dhacsan qaabka uu Gareth Southgate u horumariyay xulka qaranka England, sidaasi darteed wuxuu doonayaa inuu la soo wareego kaddib dhamaadka shaqadiisa xulka qaranka xagaaga soo aadan ee koobka Euro 2020.
Guuldarradii saddexaad, kaddib afartii kulan ugu dambeysay ay ciyaartay Manchester United ayaa sababtay in taageerayaasha kooxda ay weeraraan qoyska reer Glazer oo leh milkiyada kooxda iyo Ed Woodward, waxaana sidoo kale jira muuqaalo muujinaya niyadjab laga dheehan karo wajiyada shaqsiyaadka saameynta leh sida Sir Alex Ferguson.
Dhinaca kale Kooxda Manchester United ayaa la la xiriirinayaa macallinkii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino, laakiin waa inay bixiyaan lacag dhan 10 milyan oo gini.